Malunga nathi-Ningbo Joiwo Ukuqhuma ubungqina Technology Co., LTD
Ulapha : Ikhaya>Ngathi
Umzi-mveliso wethu wafuduselwa kwisiza esitsha ngo-Epreli ka-2012 unendawo yemveliso ezi-4,500 zeemitha zesikwere kwaye yaxhotyiswa ngemveliso yanamhlanje kunye noomatshini bokulungisa. Inkampani yethu inesakhono se-R & D, ukuvelisa, ukuhlanganisa, ukuvavanya, ukufakela kunye neenkonzo zobugcisa. Sibambelela kumgaqo "ophakathi kwabathengi" kwaye sihlala sithobela ubambiswano lwexesha elide kunye nabathengi bethu, sizama ukuba nguvulindlela ebaleni kwaye senze uphawu lodidi lokuqala.
Ixesha lokuqala lokubonelela ngezisombululo zobungcali.
Sisebenza ishishini kwihlabathi liphela kwaye sigxile kwimimandla yaseYurophu, eAsia naseAfrika nasekwakheni ubudlelwane obomeleleyo nabathengi bethu. Nangona kunjalo, uluhlu lweemveliso luhlala lukhula ngokweemfuno zabathengi bethu.
Intelekelelo yamaxabiso ekhawulezileyo kunye neNkonzo yokuSampula.
Umgangatho kunye nomthengi uza kuqala yimigangatho yethu.
Ishishini elidityaniswe nesayensi, umzi mveliso, urhwebo.
Inkqubo yesibini yoLungiselelo